Fanapariaham-pahefana : ahoana ny amin’ny famindrana ny vola iasana ? | SEFAFI
Nasain’ny fitondrana ankehitriny nolanian’ny Antenimieram-pirenena an-katerena ny fitambaran’ny lalàna vaovao mifehy ny fanapariaham-pahefana tamin’ny 2014 : ny lalàna 2014-018, 2014-020 sy 2014-021, ary ny didy fampiharana vitsivitsy mikasika ny fananganana ny rafitra miara-mandinika ny asan’ny olom-boafidy eny an-toerana, momba ny fitantanana ny toe-bolan’ny vondrom-bahoaka sy ny fiaraha-miasa mipariaka. Misy didy fampiharana hafa nampanantenaina mbola andrasana, ny ho voakasik’izany dia ny fokontany, ny fifandraisan’ny vondrom-bahoaka ary ny fanohanana ara-kevitra ny CTD (Vondrom-paritra itsinjaram-pahefana) avy amin’ny solontenam-Panjakana.
Hafa ny mamoaka lalàna, hafa ny mampihatra azy. Takian’ny lalàna mantsy ny hanavaozana ny tompon’andraikitry ny fokontany isaky ny vita ny fifidianana kaominaly, saingy tsy mbola nisy vita izany, efa ho roa taona sy tapany izay. Mbola ratsy lavitra noho izany, ireo sefo fokontany izay nanohy foana nanatontosa ny adidiny dia niasa jamba rafozana tsy nahazo ny tambin-karama voalaza, nefa vola kely dia kely izy io, ary manahirana ny Fanjakana ny mandoa azy ara-potoana.
Manindrahindra ny fanatanterahana ny fanapariaham-pahefana ny fitondrana ka fara faharatsiny mba tokony hitana ny teniny. Ankehitriny anefa, maro ny kaomina mbola tsy nahazo manontolo ny famatsiana ara-bola hoenti-miasa efa noferan’ny lalànan’ny tetibola 2016 sy ny lalànan’ny tetibola efa nahitsy. Fampanantenana fotsiny no mba ataon’ny fanjakana fa handrotsaka vola ho fampandrosoana ny faritra mitentina 200 tapitrisa Ariary ho an’ny distrika tsirairay ankehitriny ! Dia loza no mitranga : mandritra ny ifandroritan’ny solombavambahoaka sy ny lehiben’ny distrika ny amin’ny fifehezana ny fitantanana izany vola izany, ny hany azon’ny kaomina atao dia ny manolotra tetikasa lazaina fa lohalaharana any amin’ny CLD (Komitim-paritra ho an’ny fampandrosoana) natsangana isaky ny distrika noho io toe-javatra io.
Satria mbola tsy tafapetraka ny faritra dia ny sefo distrika (notendrena mba hialana amin’ny fivangongoana fa tsy nofidiana) no hanapa-kevitra ny amin’ny hampiasana ny vola fanampiana ny kaomina, miaraka amin’ny solombavambahoaka.
Ny fifehezana ny vola natokana hampiasaina any aminy dia tsy lasan’ny kaomina, izay hany vondrom-bahoaka tafajoro hatramin’izao, dia noraisin’ny fitondrana foibe io tamin’ny alalan’ny distrika, izay miankina amin’ny fialana amin’ny fivangongoana. Na dia ny solombavambahoaka aza no vy nahitana sy angady nananana ny famoronana ny tahiry ho fampandrosoana ny faritra, dia ny kaomina mandrafitra ny boriborintany no tokony hampiasa azy. Fa raha mbola mikiry biby hitantana ny vola an-kolaka foana ny fanjakana dia aoka hatsahatra ny resaka fanapariaham-pahefana.
Nanomboka tamin’ny krizy politika tamin’ny 1991, izay niafara tamin’ny fananganana ny andiany voalohany tamin’ny kaomina, dia ny kaomina hatramin’izao no hany endriky ny fanapariaham-pahefana mbola miasa. Tafalatsaka any ambanin’ny faritry ny 1%-n’ny teti-bolam-pirenena ny fanampiana ara-bola avy amin’ny fanjakana hoentiny miasa tamin’ny 2015, nefa io anjarany io dia tany amin’ny 3 % tany ho any nandritra ny Tetezamita ary 5% talohan’ny 2009. Tamin’ireo fotoana ireo, tatsy Afrika dia 7% ny salanisan’io anjara io. Ny PND moa dia nilaza fa hakarina 16% io anjara io manomboka izao ka hatramin’ny 2019...
Tamin’ny 2004 no natsangana araka izao endriny safiotra izao ny faritra. Roa ambin’ny folo taona izay ireo fanjakana nifandimby dia tsy nahavita nampanao fifidianana mifandraika amin’ny vondrom-bahoaka antenatenany voalazan’ny Lalàmpanorenana (Faritra sy Faritany). Ary na nisafidy ny hampanao fifidianana tsy mivantana ho an’izany aza ny Antenimieram-pirenena, dia mbola tsy nisy na inona na inona vita tamin’ity taona ity.
Ny kaomina anefa malemy loatra ka tsy afaka hifanakalo hevitra hahombiazana miaraka amin’ny fitondrana, tsy ho vitany na oviana na oviana ny handresy lahatra ny amin’izay tetikasa hampiasana ny volam-panjakana (PIP) ka hanomezana fahafahampo ny filàna fototry ny olom-pirenena. Ny PIP dia mijanona ho tantanan’ny fitsinjaran’asan’ny ministera, nefa ny CTD tsy nandray anjara, na indray mandeha aza tamin’ny dinika ara-bola natao hahalalana izay handefasana ny tahiry hampiasaina eo amin’ny sehatry ny fampiasam-bola. Ankoatra izany, tsy misy aloha na iray aza hatramin’izao fikambanan’ny CTD na fikambanan’ny ben’ny tanàna mahatafiditra ny heviny any amin’ny teny midina avy any ambony. Noho izany ny kaomina dia mihanona fotsiny amin’ny vola kely avy amin’ny hetra eo an-toerana mba hanatanterahana ny adidiny manoloana ny filàna fototry ny olom-pirenena (sora-piankohonana, fanabeazana, fahasalamana, rano fisotro madio, sns.).
Soa ihany fa noho ny fanohanana sy ny fiarahana tamin’ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola avy any ivelany, dia mba nisy kaomina efapolo eo ho eo nahatratra ny faritry ny fahaleovantena ara-bola sy ara-pitondrana araka ny lalàna manan-kery. Mahatratra 1.695 anefa ny isan’ny kaomina eto amintsika, ary tsy mitsaha-mitombo io isa io. Mety angamba ny maka tahaka ny fanao mahomby any amin’izay kaomina tsara tantana mba hanamafisana ny vondrom-bahoaka fototra.
Misy faritra misongadina toy ny CTD antenatenany izay mety hanampy amin’ny fanaparitahana ireny fanao mahomby ireny. Mety loatra raha fifidianana mivantana no enti-manangana azy ireny ary ampifandraisina amin’ny fanambin’ny fampandrosoana ny fifampiankinana ary ny fiaraha-mientana tsikaritra eo amin’io sehatra io. Hatokana ho an’ny faritany fotsiny ny fifidianana tsy mivantana, amin’izay hihamafy ny anjara asany amin’ny maha mpampifanohy azy.
Amin’izay, havesa-danja kokoa, satria tafatambatra, ny asan’ny ambaratonga telon’ny CTD rehefa mifampiraharaha ny amin’ny famatsiam-bola ho an’ny fampiasam-bola ho fampandrosoana ara-toekarena ny faritany. Noho izany, dia mba mety hitombo tsara koa ny volam-pirenena nomena hotantanan’ny faritra.
Manaraka izany dia tsara raha faranana ny fanampian’ny fanjakana, mandrakariva mantsy, ireny no loharano miteraka ny kolikoly avo lenta, satria manahirana be, takona ary tsy voaara-maso ara-dalàna ny fandehan’ny famindrana ny vola.
Ary farany, afaka manao fifanekena-rafitra miaraka amin’ny CTD ny fitondrana rehefa hampihatra politika ho an’ny vahoaka. Izany no hahafahana miala amin’ilay Fanjakana tsy refesi-mandidy mankany amin’ny Fanjakana mpandamina, izay mamorona ny politika ho an’ny vahoaka, mampanaja ny fenitra isan-tsokajiny, mampihatra ny lalàna sy ny fitsipika, manara-maso ny maha ara-dalàna ny asa atao ary manasazy.
Ahena ny Fanjakana saingy hatsaraina ny Fanjakana ; izany hoe, miala amin’ny fitondrana mivantana mankany amin’ny fitondrana miasa ho an’ny fampandrosoana faritra mahavita tena.
Antananarivo, androany faha-17 Desambra 2016